မီဒီယာ Post-ထုတ်လုပ်မှု၏အသစ်သောပုံမှန်အပေါ် panel ကို | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » မီဒီယာ Post- ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သစ်ကိုပုံမှန်အပေါ် Panel ကို
axle ai သည်အမေရိကန်ပြည်သူ့ရုပ်မြင်သံကြား၏ Gerry Field နှင့် Youngevity မှ Scott Salik တို့ပါဝင်သည့် New Normal အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင် Backblaze နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ယခုအစီအစဉ်၏ streaming ဗားရှင်းကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည် tinyurl.com/newnormalpanel.
axle ai ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sam Bogoch က“ ဒီထင်ရှားတဲ့ဖောက်သည်နှစ် ဦး ဟာဒီကနေ့မီဒီယာလုပ်ငန်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို freewheeling ဆွေးနွေးမှုမှာပါ ၀ င်ရတာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။ COVID-19 သည်အပြောင်းအလဲများစွာနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောမီဒီယာလက်လှမ်းမီမှုနှင့် cloud workflows များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအသစ်ကိုယူဆောင်လာသည်။ မီဒီယာဖောက်သည်များအဖို့အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်းသည်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်။ ဒီဆွေးနွေးမှုမှာဒီကွဲပြားခြားနားတဲ့အသင်း ၂ ခုဟာဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသလဲ၊ ဒီနှစ်မှာသူတို့ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
Bogoch မှာကိုယ်ရေးအကျဉ်းပဲ တနင်္သာရီ မီဒီယာအသင်းများကိုအဝေးမှအလုပ်လုပ်ရန် ၀ င်ရိုး axi သည်အင်္ဂါနေ့ကသန်းခေါင်စာရင်း PDT တွင်အဆုံးသတ်သောမျှတသောလူစုလူဝေးရန်ပုံငွေရှာခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်နေသည်။ မည်သူမဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်: သွားပါ republic.co/axle-ai အသေးစိတျအဘို့။
ဘော်စတွန်တွင်အခြေစိုက်သည် axle ai သည်အဝေးမှမီဒီယာကြည့်ရှုရန်နှင့်ရှာဖွေရန်အတွက်အခြေခံကျကျရိုးရှင်းသော software ကိုတီထွင်ရာတွင်အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြေရှင်းနည်းများသည်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်း ၆၀၀ ကျော်ကို၎င်းတို့တီထွင်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူသည့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းများကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ Axle ၏ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုသည်တိုးတက်လာသောလိုအပ်ချက်ကိုထူးခြားစွာဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ပညာရေး၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ အားကစား၊ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက leရာဝတီ နှင့်ရှယ်ယာ crowdfunding republic.co/axle-ai.
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Backblaze သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စားသုံးသူများအတွက်ဆုရ cloud သိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိဖောက်သည်အချက်အလက်များ၏ဥပမာတစ်ခုထက်ပိုရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ B2007 Cloud Storage သည်ရိုးရိုး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ သုံးစွဲသူများသည် cloud oligarchy မှလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးရှိသောသိုလှောင်မှုစျေးနှုန်းကိုခံစားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းအသွားအလာစီးဆင်းမှု၊ အရန်ကူးခြင်းနှင့်အခြားအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်နှင့်မည်သည့်အချက်များအကြားရွေးချယ်စရာမလိုပါ။ San Mateo, CA တွင်ရုံးချုပ်၊ Backblaze တွင်လူ ၁၅၀ ခန့်ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ backblaze.com
Senior Hire Oliver Taprogge နှင့်အတူခြံစည်းရိုးနှင့် WaterBear Bolster ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ - စက်တင်ဘာလ 7, 2020
သုညအပေးအယူဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်း OTT အရည်အသွေး - သြဂုတ်လ 30, 2020
Bonneville အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်မန်နေဂျာ Carl Gardner အငြိမ်းစားယူသည် - သြဂုတ်လ 12, 2020
ယခင်: လက်ထောက်အယ်ဒီတာ (ဟိန္ဒူစကားပြော)
နောက်တစ်ခု: Neve® 8424 Console ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း - ဒီနေ့ခေတ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသောလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောခေတ်မီ Console တစ်ခု
Chulalongkorn တက္ကသိုလ်မှအွန်လိုင်းနှင့် Streaming အတန်းများအတွက် Blackmagic Design Workflow ကိုအသုံးပြုသည်